In kabadan 60 qof ayaa maydkooda laga helay konteenar xamuul – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA In kabadan 60 qof ayaa maydkooda laga helay konteenar xamuul
In kabadan 60 qof ayaa maydkooda laga helay konteenar xamuul
In ka badan 60 qof oo la rumeysan yahay inay tahriibayaal ah oo ka yimid Itoobiya ayaa laga helay konteenar xamuul ah magaalo ku taal gobolka waqooyiga-galbeed ee Tete, sida ay sheegeen saraakiisha.
Booliska iyo laanta socdaalka ayaa joojiyay gaari xamuul ah oo ka yimid Malawi subaxnimadii hore ee talaadada gobolka Tete, oo ay xuduud la wadaagaan Malawi dhinaca kalena Zimbabwe.
Amelia Direito, oo ah afhayeenka adeegyada soogalootiga Tete, ayaa sheegtay in mas’uuliyiintu ay hubinayeen konteenarka kadib markii ay maqleen mamnuuc ka imaanshaha gudaha. Waxay ka heleen 14 qof nool meydadka 64 kuwaas oo u dhintey tuhun la xiriira in koontiinarka lagu xidhey oo naqasku ku dhagey.
Direito ayaa yidhi “Darawalka gaadhiga iyo kaaliyeyaashiisa (labadaba reer Mozambic) ayaa ay xireen booliska,” Direito ayaa sidaas yidhi.
Waxay intaas ku dartay darawalka in booliska usheegay in loo balan qaaday 30,000 meticais (kudhowaad $ 500) si ay u qaadaan ragga.
Bilayska ayaa bilaabay olole loogu talagalay “dhex-dhexaadiyaha fududeeyey soo gelitaanka sharci-darrada ah ee Itoobiyaanku ku soo galeen waddanka,” ayay tidhi.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Addis Ababa ayaa sheegtay inay “xaqiijisay safaaradda Itoobiya ee Koonfur Afrika in dad badan oo Itoobiyaan ah oo ku safrayay gaari ka yimid Malawi kuna sii jeeday Mozambique ay dhinteen”.
Waxay sheegtay inay ka shaqeyneyso sameynta tirada dadka dhintay iyo aqoonsigooda.
“Wasaaraddu waxay si murugo leh u muujineysaa musiibada waxayna gaarsiin doontaa dhambaal xoog leh ehelkii iyo asxaabtii marxuumiintaa,” ayay tiri.
Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM) ayaa sheegay in dadka badbaaday lagu daaweynayo harraad daran iyo daal daran.
Mozambique guud ahaan waxaa loo arkaa inay tahay wado tahriibe oo tahriibayaasha doonaya inay u socdaalaan South Africa.
Koonfur Afrika, oo ah waddanka ugu wax soo saarka badan qaaradda, ayaa magnet u ah soogalootiga saboolka ah oo aan ka imaanin kaliya dalalka deriska ah sida Lesotho iyo Zimbabwe laakiin sidoo kale waxay ka yimaadeen waddamo kale oo dheeraad ah, sida Itoobiya.